Dabka yaa sudhey Wadani oo kala daadinaaya? Qalinkii:Maxamuud-Yaasin Cabdilaahi Ciro |
Dabka yaa sudhey Wadani oo kala daadinaaya? Qalinkii:Maxamuud-Yaasin Cabdilaahi Ciro
Falalkii ceebta ahaa, nidaamka dimuqraaddiyadana aad uga foogaa ee ka dhacey shirkii Golaha Dhexe Waddani ayaa muwaadiniin badan is weydiinayaan maxaa sababey.Marka la fiiriyo hab-dhaqankii lagu maamuley Shirkii Golaha Dhexe ee Xisbiga, waxa soo shaac baxey in taladii gacanta u gashey 4 kooxood oo is garab gucleynaya.
Kooxahaas oo dadku durba magacyo u bixiyen.Kooxda 1aad ayaa ah niman la yidhaa Mus-Dambeedka oo u badan rag heyb ahaan ka soo jeeda ardaaga Guddoomiyaha Xisbiga Cabdiraxmaan Ciro. Nimankaas oo aaminsan lahaanshaha Xisbiga maadaama ay Guddoomiyaha isku reer yihiin, waana dhib had iyo jeer ku dhacda xisbiyada Qaranka Somaliland, waxaan sabab u ah qabyaalada oo ka xoog badan ku dhaqanka shuruucda xisbiyada iyo dalka u dejisan.
Kooxda 2aad ayaa ah niman aaminsan aragtida ma dhaleyska noqotey ee Somailweyn, waana koox, markii ay ka soo quusteen Xamar raadinaaya meel ay saaxada Siyaasada Dalka ka soo galaan iyagoo og in bushada Somaliland mar hore ka quusatey. Waaxeyna Xisbiga Waddani u doorbideen ku biiristiisa markey aamineen in Guddoomiye Ciro la fahamsiin karo mabda’a Somaliweyn maadaama aanu halgankii Dalka lagu xoreeyey haba yaraate wax saameyn ah ku laheyn oo rajiimkii dhiig yacabka ahaa ku dul dumey isagoo wali hoos jooga. Waana kooxda hindisaha shirqoolkii ku dhacey Gudoomiye ku-Xigeenka 1aad ee xisbiga laheyd. Ujeedooyinka ay kooxdani ugu hiiliyeen Maxamed Cali Aw-Cabdi , murashaxii la tartamaayey Axmed Muumin Seed ayaa la xidhiidha taariq nololeedka u la wadaago Guddoomiye Ciro markii u kacaankii Siyaad Barre ku dul dumey iyagoo labadooduba wali shaqaale u ahaayeen.
Kooxda 3aad ayaa iyaguna ah kuwii afgembigii iyo khiyamada Qaran kula kacey Xukuumada haatan dalka ka talisa ee sida xalaasha lagu doortey. Waxaanu maankoodu u sheegey in ay Xisbiga Waddani hogaanka u qaban karaan tiiyo ay Guddoomiye Ciro u arkaan Hogaamiye jilicsan oo go’aan qaadasho adag aan leheyn.
Kooxda 4aad oo la moodo in ay kooxda 1aad xidhiidh dhow la leyiihiin ayaa iyaguna u badan niman xilal Sare ka soo qabtey Xukuumadii Dahir Rayaale. Waana kuwii ugu awooda badnaa wakhtigii Daahir Rayaale ee markii dambena guuldaradii Xisbigii UDUB horseedka ka noqdey. Kooxdan ayaa talooyinkii guracnaa ee ay Daahir Rayaale guusha ku seejiyen manta ula yimi Guddoomiye Ciro, tiiyo nasiib darada taagan tahey in haba yaraate Guddoomiye Ciro fahmi waayo kooxdan guul darooyinka Siyaasadeed ehelka u ah.
Sikataba ha ahaatee, waxa maalmaha soo socda la kala ogaan doona in dabka ay kooxahan sudheen Xisbiga Waddani u horseedo kala daadsanaan ku timaada Xisbiga isku diyaarinaaya Doorashada Horaanta sannadka dambe ka dhici doonta Somaliland. Waxaana Durba soo muuqata in Xisbiga Waddani u kala jabayo laba garab mar haddi Guddoomiye Seed xubnihii ladqabadiisa loogu direy u sheegey in in iyaga laftoodu goob joog ka ahaayeen caddaaladdaradii lagu sameeyey, isla-markaana u ku eedeeyey in ay iyagu dabada ka riixayeen ceebta dimuqraaddiyadda ka baxsan ee shirka lagaga sameeyey.